Sawiro Askar Itoobiyaan Ah Oo Ku Dhintay Shil Diyaaradeed. – Calamada.com
Sawiro Askar Itoobiyaan Ah Oo Ku Dhintay Shil Diyaaradeed.
Diyaaradan oo aheed noocyada Milatariga dowlada Xabashida Itoobiya ayaa ku burburtay Duleedka magaalada Addis Ababa ee Caasimadda Itoobiya,iyadoona faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay shilkaasi.
Diyaaradan Milatari ayaa ka duushay magaalada Diri-dhabe oo ka mid ah Dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira Gumeysiga dowlada Xabashida Itoobiya waxeyna diyaaraddan si gaar ah ugu burburtay deegaan qiyaastii 48 KM dhanka Koonfur Bari uga beegan Addis Ababa.
Inta la xaqiijiyay Shilkan diyaaradeed waxaa ku dhintay 18 ruux oo 15 ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidamada Milatariga dowlada Xabashida Itoobiya,iyadoo gabi ahaan ay burburtay diyaaradda Elecobtarka ah.
Saraakiil u hadashay dowlada Xabashida Itoobiya ayaa sheegay in gabi ahaan ay dhinteen dadkii la socday diyaaraddan Milatari sidoo kalane gabi ahaan ay burburtay diyaaraddaasi.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Burburka Diyaaradda.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 19-12-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 20-12-1439 Hijri.